Qiimaha iyo ROI ee Shirarka | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 17, 2011 Sabtida, Janaayo 12, 2013 Douglas Karr
Shirkii ugu horreeyay ee aan tago wuxuu ahaa bandhig teknolojiyad warshadeed oo heer gobol ah. Waxaan ahaa koronto yaqaan warshadeed oo ka shaqeeya Wargeys, madaxdayguna ma bixin doono. Marka waxaan iska bixiyay qaabkeyga. Waxaan heysanay nidaamka gawaarida lagu qaado qalabka elektarooniga ah ee kudhawaada qalabka elektaroonigga ah oo qasab ku ahaanaya inlaga agdhawado qalabka ay sanadka oo dhan jeex jeexi lahaayeen Waxaan soo marnay boqolaal iyaga oo midkiiba boqolaal doolar ahaa. Bandhigga, waxaan ka helay shirkad ka sameysay iyaga oo leh dhammaan qaabab, cabirro iyo habeynno masaafo u dhow. Waxaan tijaabinay aalad dareemayaal cusub oo raqiis ah oo leh farqi ballaadhan… oo aan marna loo baahneyn in mid kale la beddelo.
Shirku wuxuu badbaadiyay shirkadeena tobanaan kun oo doolar, laakiin madaxeygu kuma bixin doonin $ 20 ama wax la mid ah inuu soo galo. Waxay ii ahayd cashar nololeed in shirarku u qalmaan miisaankooda dahabka. Marka waxay igu abuureysaa inay jiraan shirkado aad u tiro badan oo xitaa aan lahayn miisaaniyad ay kaga qaybgalaan shir goboleed, qaran ama shir dalxiis! Kuweena Zoomerang ra'yi ururin todobaadle ah ayaa muujisay in kabadan 25% aysan haysan wax miisaaniyad ah shirkasta! Shirarku waa mashiinno ujeedo leh. Kaliya maahan inay kaa farxiyaan maxaa yeelay waxaad ku hareereysan tahay asxaabtaada, waxay dib u soo celinayaan habka fikirkaaga waxayna kaa dhigayaan inaad ka fikirto banaanka ceeriga shirkaddaada.
Shirarka qaran - si aan runta u sheego, marar dhif ah ayaan tagaa kalfadhi shir qaran! Waqtigeyga waxaan ku qaataa hoolka iibiyaha waxaanan dib ugulaabtaa gadaal iyo gadaalba anigoo kuxiraya hogaamiyaasha warshadaha. Habeenkii, waxaad iga heli kartaa baarar kasta oo hudheel oo hoy u ah martida. Wadahadalka lala yeesho hogaamiyaasha warshadaha waa wax cajiib ah. Haddii aad u oggolaato shaqaalahaaga inuu aado shir qaran, waxaad siisaa miisaaniyad baarka si ay ugu iibsadaan rajo, iibiye, ama hoggaamiye warshad sharaab ama laba. Halkaas ayaa sixirku ka dhacayaa!
Shirarka gobolka - haddii aad rabto inaad u ekaato qof weyn qaran ahaan, waa inaad ku weynaataa gobol ahaan. Waan jeclahay kalfadhiyada hogaaminta shirarka gobolada. Waxay i siineysaa fursad aan ku tijaabiyo bandhigyada cusub ee aan la wadaago dhagaystayaasha aan aqaanno oo aan la kulmo hibada maxalliga ah. Waxaan xaadiraa fadhiyada shirarka gobolka inta badana waan iska dhaafa cabitaanka kadib. Mararka qaar kalfadhiyadu xoogaa yar bay xaraash yihiin ama wax iib yihiin I laakiin sida caadiga ah waxaan ugala baxaa macluumaadka aan isticmaali karo. Shirarkani waa kuwo aan qaali ahayn, markaa ROI way fududahay in la sameeyo.
Shirar Virtual - haddii aad tahay iibiye ama ku hadla, ma jirto wax ka soo laabasho wanaagsan oo maalgashiga ah marka loo eego shirarka dalwaddii. Dadku waxay ka soo qayb galaan dhacdooyinkan si ay wax u bartaan una iibsadaan. Hadday danayn lahaayeen la kulanka afhayeenka, way u safri lahaayeen shirka. Ganacsiga aan ka soo baxno shirarka dalwaddii (2dii shirkadood ee ugu dambeysay ee aan la soo shaqeeyay) wuxuu ahaa mid cajiib ah. Haddii aad ka soo qayb gasho, waa wax cajiib ah - waad bixi kartaa, soo noqon kartaa, arki kartaa demo kasta oo aad waligaa rabto, oo aad ka sameyso miiskaaga (ama sariirtaada).
Shir ma jiro? Daacad baan ahay oo waxaan kuu sheegayaa in maskaxdaada (ama haddii aad tahay madaxa… maskaxda shaqaalahaaga) ay u jeesanayso mush. Ka bax xafiiska oo tag dib u soo cusbooneysii! Haddii aad madax tahay, ku xujee shaqaalahaaga inay la soo noqdaan 3 xeelado muhiim ah oo ka guuleysan doona kharashka safarka iyo kharashka tigidhka. Haddii aad shaqaale tahay, u ballanqaad maamulahaaga inaad la soo noqon doonto 3 xeelado muhiim ah oo ka gudbi doona kharashka!
Si loo helo shirar, waan jeclahay Qorsheynta iyo Lanyrd. 3 shirarka waaweyn ee aan ugu jeclaa ayaa ahaa Bandhigga BlogWorld, Webtrends Wadahadal, Iyo Xiriirada 'ExactTarget'. Deegaanka halkan Indiana, BlogIndiana waa jecel yahay. Iyo shirarka dalwaddii - Waan jeclahay dhammaan Baadhaha Warbaahinta Bulshada dhacdooyinka iyo tan kale!
Fadlan ka faallood shirarka aad jeceshahay iyo hadday yihiin kuwa qaran, kuwa gobol ama kuwa iska soo horjeedka ah!
Tags: shirka suuqaynta suuqgeyntashirka suuq geyntashirkii warbaahinta bulshada
nQiiri Bogagga Kordhiyay Booqashadoodii oo dhan 9.6%.
Nov 17, 2011 saacadu markay tahay 2:26 PM
Farriin weyn, Douglas. Shirarku waa habab gaar ah oo loola xiriiro dadka fikradaha la midka ah. Had iyo jeer waan ka soo noqdaa iyaga oo dareemaya dib-u-kicin iyo ku faraxsanahay isku-xirnaanta xiriiro cusub oo aan sameeyay. Waxaan sidoo kale caadi ahaan la soo noqdaa ugu yaraan hal fikrad oo saameyn weyn ku leh ganacsigeyga. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan shirkadaha inay hubiyaan inay kaqeybgalayaan shirarka muhiimka ah ee ku jira niche.
Nov 17, 2011 saacadu markay tahay 7:23 PM
Marka laga reebo fursadaha isku-xirnaanta, kuwaas oo si fiican ugu habboon qiimaha gelitaanka shirarka badankood, diiradda la saarayo dadaallada suuqyada tooska ah ayaa sidoo kale noqon kara wax soo saar badan. CES waxay ku fiican tahay inaad naftaada ku dhex gasho tiknoolajiyada ugu dambeysa uguna weyn ee macaamiisha, laakiin sameynta isku xirnaanta shirarka daryeelka caafimaadka ee gobolka, tusaale ahaan, waxay ku siin karaan wadiiqo gudaha ah oo ku saabsan suuqgeynta tikniyoolajiyadda daryeelka caafimaadka, oo hadda kobcaya.
Nov 17, 2011 saacadu markay tahay 7:43 PM
Waxaan u maleynayaa in dadkeena PR ee DittoePR ay natiijooyin fiican ka heleen CES sidoo kale, Zoyd. Talooyin fiican!